DJI ayaa u oggolaan doonta diyaaradaheeda inay duulaan ayagoon internet helin | Qalabka bilaashka ah
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ku haysta DJI Diyaaradohooda waa si sax ah, in laga diro calaamadda kontoroolka aaladda lafteeda si ay ugu hagto meesha aan dooneyno, waxaa lagama maarmaan ah in lala shaqeeyo astaamaha xogta, badiyaa waa isku xirka WiFi, taas oo ay ugu wacan tahay qaab dhismeedkeeda iyo habka ay u shaqeyso, waa la jabsan karaa. Dhinaca kale, sidoo kale waa run in qaar badan oo ka mid ah codsiyada DJI waa inay had iyo jeer ku xirnaadaan internetka, isha kale ee dhibaatooyinka.
Mid ka mid ah war-saxaafadeedyadii ugu dambeeyay ee ay soo saartay shirkadda Shiinaha, waxay u muuqataa inay haddaba haystaan ​​koox xul ah oo injineerradooda ah oo ay haddaba ka shaqeynayaan horumarinta nnidaam isgaarsiineed oo cusub oo udhaxeeya kantaroolaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn taas oo u oggolaanaysa kuwan inay si sax ah u shaqeeyaan iyadoon loo baahnayn inay xog ku diraan shabakadda, taas oo iyana ka dhigaysa codsiyada xakamaynta duulimaadka mid aad u dhakhso badan oo waxtar badan leh.
DJI waxay durbaba ka shaqeyneysaa qaab cusub oo isgaarsiineed iyadoon loo baahneyn xiriir internet
Sida muuqata, fikradda ay ka shaqeeyaan DJI waxay si aad ah diirada u saareen helitaanka duuliyeyaasha qarsoodi badan iyo nabadgelyo xagga isgaarsiinta. Si kastaba ha noqotee, waa in la arkaa sida waxaas oo dhami u shaqeyn doonaan maadaama qaar badan oo ka mid ah codsiyada DJI ay tahay inay adeegsadaan internetka, tusaale ahaan marin u helka khariidadaha maxalliga ah, aagagga duulimaadka iyo xogta kale ee u fududeyn kara duulimaad ammaan ah qof walba. ku lug leh.
Sidaad dhab ahaan u ogtahay, dhowr toddobaad ka hor, wax aad u eg ayaa laga shaaciyey DJI, in kastoo ballanqaadkan uu yahay isbedelka barnaamijkaaga wax badan ayey sii socotaa. Gaar ahaan, waxa aan maanta haysanno ayaa ah qaab kale oo soo noqosho ah oo codsiyada aysan u dirin ama ka helin nooc kasta oo macluumaad ah internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » DJI ayaa u oggolaan doonta diyaaradeeda in ay duulaan bilaa internet
Hadiyadaha taxanaha DJI Phantom uma baahna inay ku xirnaadaan internetka si ay u duulaan. Qalabka waxaa lagu dhejiyaa qaabka diyaaradda iyo inuu u duulo dhibaato la'aan. Ha siinin macluumaad been ah ...
Jawaab Delio Alanis
Diyaaraddaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'DJI Phantom drones' uma baahna inay ku xirnaadaan internetka si ay u duulaan. Qalabka waxaa lagu dhejiyaa qaabka diyaaradda iyo inuu u duulo dhibaato la'aan. Ha siinin macluumaad been ah ...
Ma aadan fahmin waxa gelitaanku ka hadlayo.
Jawaab Juan Luis Arboledas
"DJI waxay u ogolaan doontaa diyaaradahooda inay duulaan bilaa internet" qoraalka waxaa laga yaabaa inuu fiicnaado laakiin cinwaanku aad ayuu u xun yahay ... markasta waad duuli kartaa adigoon marin internet lahayn.
Ku soo jawaab Marcelo Ferreyra
Guji halka ay ku taal cinwaannada cinwaanadooda wacaya taraafikada .. maxaa dhexdhexaadnimo ah, sidoo kale ma ahan inay lahaato wax duulaya oo hadlaya
Isbaanishka sharci ayey ku ahaan doontaa in maqaar lagu sameeyo 3D iyadoo la daabacayo dhamaadka 2017
Hal talaabo oo u dhow fahamka sida loogu shaqeeyo Kapton oo leh daabacaadda 3D